“အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ Taliban တို့နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လိုအပ်ခြင်း” | ESD | Burmese
“အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ Taliban တို့နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လိုအပ်ခြင်း”
May 8, 2019 rishi Commentry
သောတရှင်များခင်ဗျား၊ ဒီကနေ့ သတင်းဝေဖန်ချက် အခန်းကဏ္ဍမှာ နိုင်ငံရေးဝေဖန်ဆန်းစစ်သူ ဆောင်းပါးရှင် J.L. Koul Jalali ဝေဖန်ရေးသားပေးပို့ထားတဲ့ “အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ Taliban တို့နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများအား ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လိုအပ်ခြင်း” အကြောင်း သတင်းဆောင်းပါးကို ဆက်လက်ဖေါ်ပြသွားမဲ့အတိုင်း တင်ပြအစီအရင်ခံပါရစေ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ အကြမ်းဖက်ဝါဒရဲ့ မည်သည့်အသွင်ကိုမဆို ချေမှုန်းဖျက်စီးသွားမယ်ဆိုတဲ့ သန္နိဋ္ဌာန်နဲ့ လမ်းလွှဲသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ဇူလိုင်လအတွင်းက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ Taliban တို့နဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်က Qatar နိုင်ငံ Doha မြို့မှာ ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ ဆဋ္ဌမအချီကို စတင်ခဲ့ပြီး၊ ယခုတိုင် ကျင်းပလျှက်ရှိပါတယ်။ ယခုအချိန်အထိ ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှ ဘာတခုမျှ အောင်မြင်မှုမရှိသေးပါဘူး။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အထူးသံတမန် Mr Zalmay Khalilzad က ဆွေးနွေးပွဲတွေက Afghanistan မှ တပ်ဖွဲ့တွေ ရုပ်သိမ်းရေး၊ အကြမ်းဖက်ဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အာမခံပေးမှု၊ Afghanistan အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံရေးဖြေရှင်းချက်အတွက် အစပျိုးမှုနဲ့ တည်မြဲတဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး စတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ ဝန်းရံလျှက်ရှိနေတယ်လို့ သတင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ Afghanistan နိုင်ငံမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်မှုဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၇) နှစ်ကျော် ၂၀၀၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း New York မြို့မှာရှိခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးဗဟိုဌာန WTO အမွှာမျှော်စင်ကို အကြမ်းဖက်သမားတွေ တိုက်ခိုက်ဖျက်စီးခဲ့တဲ့အချိန်က စတင်ခဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ Al Qaeda နဲ့ အမေရိကန်မြေပေါ် တိုက်ခိုက်မှုကို ကြံစည်ကြိုးကိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ ယူဆတဲ့ Osama Bin Laden တို့ကို အပြစ်ဒါဏ်ခတ်ဘို့ ကတိသစ္စာပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Taliban တွေကို Al Qaeda တို့အား ခိုလှုံနေထိုင်ခွင့်ပြုထားပြီး၊ ၎င်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကလည်း တခြားအကြမ်းဖက်သမားအုပ်စုကွန်ယက်တွေ ကြီးထွားလာနေဒါကို အကာအကွယ်ပေးနေဒါကြောင့် Afghanistan နိုင်ငံကနေ အမြစ်ပါမကျန် နုတ်ထုတ်ရှင်းလင်းမယ်လို့ ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး Washington အစိုးရဟာ အကြမ်းဖက်ဝါဒရဲ့ အသွင်ပုံစံအားလုံးတို့ကို အဆုံးသတ်ဘို့ ပိုင်းဖြတ်ထားကြောင်း ဖေါ်ပြနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က သူတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေမှ ဒုတိယအကြိမ်သွေဖယ်သွားပြီး တချို့သော အကြမ်းဖက်သမားကောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ ယူဆခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်အစိုးရဟာ အကြမ်းဖက်သမားတွေက အကြမ်းဖက်သမားတွေသာဖြစ်ပြီး၊ ကောင်းတဲ့အကြမ်းဖက်သမားသို့မဟုတ် ဆိုးဝါးတဲ့အကြမ်းဖက်သမားလို့ သီးခြားမရှိဘူးဆိုဒါကို အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ဆုံခံစားခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံးရဲ့ ခိုင်မာတဲ့ယူဆချက်တခုကတော့ အကြမ်းဖက်သမားကောင်းတယောက်နဲ့ အကြမ်းဖက်သမားဆိုးတယောက်တို့အကြား ကွာခြားမှုဟာ ခိုင်မာတဲ့လူမျိုးရေးအပေါ် အခြေမခံဘဲ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှ အကြမ်းဖက်ဝါဒကို သုတ်သင်ချေမှုန်းရေး အဓိဋ္ဌာန်အား အားနည်းစေဒါဘဲဖြစ်ပါတယ်။ တခြားတဖက်မှာလည်း ယခုလိုနိုင်ငံရေးအရ လက်ကမ်းကြိုဆိုဆွေးနွေးခြင်းတို့ဟာ အရင်းအမြစ်ကျတဲ့ အတွေးအခေါ်အယူအဆတွေကို အားပေးရာကျရောက်ပြီး၊ နောက်ထပ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆီသို့ ဦးတည်စေမယ်သာဖြစ်တယ်လို့ လေ့လာဖေါ်ပြကြပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ Taliban တို့နဲ့ ဆွေးနွေးပွဲအတွက် ၎င်းတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ထက်ဝက်ကို Afghanistan မှ ရုပ်သိမ်းဘို့ ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်း ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ နိုင်ငံအတွင်းမှာဘဲ ရှုတ်ချမှုတွေ ဖန်တီးခဲ့ပြီး၊ အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Mr Jim Mattis ကို ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်စေခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ Afghanistan နိုင်ငံမှ Taliban တို့ရဲ့ ခြေခုတ်ကို အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ Osama Bin Laden က သက္ကရာဇ် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ ပုန်းအောင်းနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရုတ်တရက်ဆိုသလိုဘဲ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ မိမိတို့ရဲ့အာရုံကို အီရတ်နိုင်ငံအပေါ် ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီး၊ နောက်ဆုံးအီရတ်စစ်ပွဲသို့ ဦးတည်စေခဲ့ပြီး၊ IS အစ္စလမစ်သူပုန်အုပ်စုနဲ့ သူတို့ရဲ့အပေါင်းအပါးတွေ ခေါင်းထောင်လာဘို့ ဖန်တီးစေခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအချက်တွေကို နောက်ခံထားခြင်းအားဖြင့် Afghanistan နိုင်ငံရဲ့ ကြီးမားတဲ့အပိုင်းဟာ ယခုတိုင် Taliban တို့ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအောက်ရှိနေဒါမို့ Taliban တွေကို Afghan အဓိကလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းထဲ ပေါင်းစည်းမှုမပြုမချင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက် Afghan မှ တပ်ဖွဲ့တွေ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့် Afghanistan နိုင်ငံနဲ့ကပ်နေတဲ့ အိမ်နီးချင်း Pakistan နိုင်ငံဟာ အကြမ်းဖက်ဝါဒကို သတို့နိုင်ငံရဲ့ပေါ်လစီ တန်ဆာပလာတခုအဖြစ် ပြုလုပ်ထားပြီး၊ Kabul အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမှာ လိုလားတဲ့ထောက်ပံ့ကူညီသူအဖြစ် ပါဝင်ဘို့ အလွန်ဘဲစိတ်ဝင်စားလျှက်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါအကြောင်းအချက်တွေကြောင့် Washington အစိုးရဟာ သူတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းပြောင်းမှုကို ပြန်လည်စဉ်းစားပြီး၊ သန္နိဋ္ဌာန်ပြုထားတဲ့ အကြမ်းဖက်ဝါဒရဲ့ အသွင်အမျိုးမျိုးနဲ့ ဝါဒဖြန့်မှုအဖြာဖြာတို့ကို ကမ္ဘာပေါ်မှ ချေမှုန်းပပျောက်စေရေးကို လက်ကိုင်ရပ်တည်သင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဓိကအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကလည်း ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးအား အကြမ်ဖးက်ဝါဒဆန့်ကျင်ရေးယန္တရားကို ပိုမိုခိုင်မာတောင့်တင်းအောင် ပြုလုပ်ဘို့ သွေးဆောင်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အဖွဲ့ကြီးဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT) ကိုလည်း ရှေးယခင် (၁၀) စုနှစ်ကတည်းက လက်ခံသင့်ပါတယ်။ အဲဒီအုပ်စုဟာ နိုင်ငံအလုံးစုံတို့ကို အကြမ်းဖက်ဝါဒကိုဆန့်ကျင်ပြီး၊ ပထဝီရေးရာ နိုင်ငံရေးသို့မဟုတ် တခြားစဉ်းစားစရာတွေမပါရှိဘဲ စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်တခု ချမှတ်နိုင်ပါတယ် စသည်ဖြင့် ဆောင်းပါးရှင် J.L. Koul Jalali ဝေဖန်ရေးသားထားတာကို နိဂုံးချုပ် အစီအရင်ခံ တင်ပြလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျား။
ဝန်ကြီးချုပ် Modi နှင့် အမေရိကန်သမ္မတတို့သည် COVID-19 အလွန် ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး၊ သမ္မတ Trump မှ ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် ကျင်းပမည့် G-7 အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန် ဝန်ကြီးချုပ်အား ဖိတ်ခေါ်
အစိုးရမှ စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုရှိရန်နှင့် လူ့အသက်များကို ကာကွယ်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်လျှက်ရှိကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ် Modi က ထပ်လောင်းပြောကြား
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်ဝါဒ၏ ဗဟိုအချက်အချာနယ်မြေအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ အစီရင်ခံစာအပေါ်အခြေခံပြီး ထပ်လောင်းပြောကြား
COVID-19 တိုက်ဖျက်နေစဉ်အတွင်း သတိမလပ်ရှိကြရန် ဝန်ကြီးချုပ်က တိုက်တွန်းလိုက်ခြင်း